Azure Cloud Shanduko: zita reMicrosoft Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Ehe, isu hatina kupenga uye hapana chakashata nemaonero ako. Azure Cloud switchch izita rekuparadzirwa kweLinux kwakagadzirwa neMicrosoft. Ini ndinodzokorora, Microsoft yakagadzira yayo yoga yekuparadzira Linux, hausi kuve wakabatwa nejee, ichokwadi chaicho. Isu takatokurukura nezve kutora chikamu kweMicrosoft muLinux Foundation, rudo rwaSatya Nadella rweLinux, uye kuti Microsoft yakaonekwa semumwe wevanogadzira kernel pavaisanganisa tekinoroji yeHyperV.
Zvakanaka izvozvi, Microsoft yakafunga kuvhura iyi kugoverwa kweLinux kwemidziyo yemagetsi inozivikanwa seAzure Cloud switch. Iyi Microsoft distro inogona kuiswa pane ma routers uye network switch Kugadzirisa traffic yako, yeuka kuti aya maratidziro emagetsi akafanana nemakomputa madiki ane zvakawanda zvezvinhu zvine komputa yako, senge microprocessor, inoshanda system, nezvimwe.
Avo veRedmond vakasarudza Linux kuti igovaniswe, dzese dzakanaka nhau. Linus Torvalds akati Linux ingadai yakunda muhondo Microsoft payakagadzira software yeLinux, yakatozviitira iyo Android nemuenzaniso iyo Hofisi, vanoshandisa maLinux maseva, vakapindira mukugadzirwa kwekernel uye ikozvino vagadzira kugovera. Ndinofunga Mr Torvalds vanogona kugutsikana.
NaAzure Cloud switch ivo vari kutsvaga yakakura kuchinjika, iri nani sisitimu yekuwana uye kugadzirisa mabugs, ayo ari muchinjika-chikuva, uye epamusoro-mashandiro mashandiro ayo data nzvimbo kana network zvinoda. Uye zvisinei nehunyanzvi dhata, zvichiri kushamisika. Muchokwadi, kubva panobuda nhau zvakatotungamira kumajee nekutaura Chii: "Izvi zvakafanana pandakaona Sonic pane Nintendo koni. Nyika yapenga here.«,«Nyika yave kuzopera, Microsoft yakagadzira kugovera kwayo kweLinux»Kana vamwe vane kuseka kwakawanda se«Ichave iri yekutanga Linux ine bhuruu skrini yekufa".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Azure Cloud Shanduko: Kugovera kweLinux kweMicrosoft
Iyi ndiyo yatove ostia ahem zvakanaka pandakaverenga nhau ini handina kuzvitenda ini ndinoti tichaenda kunoona Microsoft ichiita distro muGNU Linux kwatichaenda isu hatisi kushamisika kuti kambani yakazvimiririra inoshanda asi Microsoft, zvakanaka ndinovimba ichi chinopfuura zano rekukunda pamusoro pevaimbove vashandisi veMicrosoft.
Kwazisai uye ndinokutendai zvikuru nezvinyorwa.
Pindura kuna miguel8j
Ini ndinofunga zvese zvakanyatso nyorwa zvakashata, iyo nhau yepamutemo inoti ZVINOFANIRA, izvo muchikamu zvakajairika sezvo chiri chigadzirwa kuburikidza negore / maseva uko linux inotonga ipapo. Nenzira iyo torwald chete COPIED TO UNIX, kugona kwake kukuru ubuntu, kuri kuramba kuchikura uye kernel iyo isina zvakawanda kuti iuye pazvitsitsinho zveMicrosoft uko chinhu chega chinokunda ndechekuti iwe unogona kuumba icho chaunoda
Ini ndinofunga wakakanganisa zvakanyanya uye ini ndichatsanangura:
1. «Iyo Azure Cloud Shanduko (ACS) ndiyo yedu foray mukuvaka yedu yega software yekumhanyisa network zvishandiso senge switch. Iyo muchinjikwa-chikuva modular inoshanda sisitimu yedata repakati network yakavakirwa paLinux. »Kamala Subramaniam, Principal Architect, Azure Networking. Yakavakwa PaLinux = Yakavakwa, yaitwa, yakadzidziswa paLinux. Iyo Linux, haina kungoenderana chete. Izvo zvakajairika tichifunga kuti Unix-senge (Linux neBSD) ine dura remaseva uye supercomputers.
2. Torvalds akashandisa Minix (Unix yevadzidzi vekoreji) sekufemerwa, asi iyo Linux kernel haina kodhi yeUnix zvachose.
3.Ubuntu hauna kugadzirwa naTorvalds, iri distro yakagadzirwa neCanonical, kambani yaMark Shuttleworth.
Kana iwe uchizotaura, zvinofanirwa kunge zvichibva paruzivo, kwete yakachena spiel isina chirevo.
Ngirozi lozano akadaro
Iye akatenda kuti isu hatina nzvimbo asi vanhu veRedmond vanowedzera kuda iyo Linux kernel uye yedu GNU. : D
Nhasi OpenSource (Linux) ine musika we server uye nyika zhinji dziri kuona izvo zvinogona kuwanikwa, zvese zvakanaka zvinounza. Saka winxmics ichakurumidza kushanda neLinux kernel OS, pamwe nevavanoda winx nhare mbozha dzine zvikamu zveyroid uye linux.
Iko kushandurwa kwemakambani akazvimirira kuenda kuOpenSource hakudzivisike, vazhinji vachatofanira kumedza mazwi avo uye kutevedzera iyi modhi.
Hapana chimwe chinosara kuti chionekwe zvinoitwa netiweki yako OS; zvavachawana.
Ndinovimba kuti mairaira uye switch hazvitadzike, kuti mwenje mutema webhuruu unobatidza uye ivo vanotiudza kuti isu taida kuisa antivirus pairi. LOL :)
Uku ndiko kutanga, zviripo uye ramangwana reTolvars hegemony na richard stallman, nezvimwe ... :-D
Pindura kuna Angel Lozano
Shamwari yangu papo, ndinofunga hauna kuziviswa, Torwals haina kuteedzerwa kubva kuunix, iyo kernel yakatora minix semuenzaniso, iye musiki we minix pachake akavimbisa kuti havana kuteedzera tambo imwe yekodhi. «... kugona kwake kukuru ububtu ...» ??, Torwals haina kuvandudza ububtu, uye zvakatonyanya Azure Cloud switch kana iri linux distro, imwecheteyo fileystem, iyo imwechete kernel. Iwe unofanirwa kudzidza zvakawanda usati waita kushoropodza kwakadai
Oscar E. Monteroso akadaro
Makore matatu apfuura ini ndakangoshandisa Linux mushanduro dzakasiyana uye zvinwiwa, ndakapedza ndakanyatsogadzikana uye ndakachengeteka
Iine Linux, sisitimu inoshanda nekuwedzera kugadzikana, nekukurumidza uye nekukurumidza, kukundikana kwayo kwanga kuri kushoma kana iyo
isu tinofananidza nemahwindo. Saka angave mahwindo asiri pazvitsitsinho zve linux uye izvo zvinotengwa.
Pindura kuna Oscar E. Monterroso
Izvi zvinoitika zvinotemesa musoro, vanopa masevhisi gore Ivo vanofanirwa kutsanangurira vatengi nevatengi ndedzipi dzimwe nzira dzavanofunga kurerutsa kuomarara kwakabatana nemabasa ekushanduka-shanduka kuenda kune gore uye chii chakawedzera kukosha chavanokwanisa kupa mukati mehupenyu hwese hwechirongwa kuti chive chinonzwisisika. Izvi zvinosanganisira kusvetuka kukuru mukushandurwa kweData Centers (DPC) uye zvivakwa zveIT kuenda kuCloud, kusvetuka kwakananga kune hupfumi hwedigital.
ExTiX 15.3, isingaremi distro ine LXQt desktop iyo yatinogona kumhanya kubva ku RAM